Duulimaadyada ka imanaya Sharm el-Sheikh kuna sii jeeda Madaarka Moscow Domodedovo ee AlMasria Universal Airlines hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada ka imanaya Sharm el-Sheikh kuna sii jeeda Madaarka Moscow Domodedovo ee AlMasria Universal Airlines hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Masar • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Intii lagu jiray bishii kowaad ka dib markii dib loo bilaabay duulimaadyadii goobaha dalxiiska Masar, Madaarka Moscow Domodedovo Airport rakaabkii ku socday Masar wuxuu kor u dhaafay 20 kun oo qof.
Duulimaadkii ugu horreeyay ee AlMasria Universal Airlines waxay ka timid Sharm el-Sheikh oo cadceedu ku beegan tahay Madaarka Domodedovo ee Moscow.
AlMasria Universal Airlines waxay laba duulimaad toddobaadle ah ku tagtaa Hurghada iyo Sharm el-Sheikh maalmaha Arbacada iyo Axadaha, Jimcaha iyo Sabtida, siday u kala horreeyaan.
Waqtigan xaadirka ah, ujeedka Masar waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan rakaabka Madaarka Moscow Domodedovo.
Madaarka Moscow Domodedovo soo dhaweeyay duulimaadkii ugu horeeyay ee AlMasria Universal Airlines, kaas oo ka yimid Sharm el-Sheikh oo qoraxdu ka muuqato.
The Carrier wuxuu ka shaqeeyaa laba duulimaad toddobaadle ah Hurghada iyo Sharm el-Sheikh maalmaha Arbacada iyo Axadaha, Jimcaha iyo Sabtida, siday u kala horreeyaan. Imaanshaha garoonka diyaaradaha Domodedovo 09:20, bixitaanka 10:20.
Waqtigan xaadirka ah, meesha loo socdo Masar waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan rakaabka dekedda hawada. Intii lagu guda jiray bishii koowaad kadib markii dib loo bilaabay duulimaadyadii goobaha dalxiiska ee Masar, gaadiidka rakaabka ayaa kor u dhaafay 20 kun oo qof.
AlMasria Universal Airlines waa diyaarad gaar loo leeyahay oo laga leeyahay Masar. Carrier -ku wuxuu ka shaqeeyaa duulimaadyo joogto ah iyo kuwo kiro ah 14 goobood, wuxuu leeyahay 13 sano oo waayo -aragnimo ah xagga adeegga rakaabka.
Domodedovo, si rasmi ah “Domodedovo Mikhail Lomonosov International Airport” waa garoon diyaaradeed oo caalami ah oo ku yaal Domodedovo, Moscow Oblast, Russia, 42 kilomitir koonfur-bari ka xigta bartamaha Moscow. Moscow Domodedovo Mikhail Lomonosov Airport waa mid ka mid ah xarumaha hawada ee ugu weyn Ruushka. Sanadka 2020, garoonka diyaaradaha wuxuu u adeegay 16.4 milyan oo rakaab ah. Xubno ka mid ah isbahaysiga diyaaradaha ee ugu horreeya adduunka oo ay ku jiraan Star Alliance iyo oneworld ayaa doortay Madaarka Moscow Domodedovo duulimaadyadooda Moscow.
AlMasria Universal Airlines waa diyaarad gaar loo leeyahay oo Masar laga leeyahay oo fadhigeedu yahay Masar. Diyaaraddu waxay ka shaqaysaa adeegyo jadwal ah iyo kuwo kiro ah oo laga keenay Masar. 'AlMasria' wuxuu ka soo jeedaa erayga Carabiga ee 'Masri'.